Maalinta: Oktoobar 23, 2019
Dhamaan garoomada diyaaradaha ee dalka Turkiga, sanadkan ee muddo January-September waqti loogu dhaqmaa kun 161 259 453 milyan oo rakaab u safray. Boqolkiiba 22 ee rakaabka waxay adeegsadeen garoonka diyaaradaha Istanbul. 9 bil kasta garoonka diyaaradaha Istanbul [More ...]
Karabük Iron iyo steel Industry and Trade Inc. (KARDEMIR), nidaamka hada qorshaynta kheyraadka shirkada (ERP) SAP R3, SAP S / 4 HANA nidaamka si kor loogu qaado baahiyaha mashruuca isbedelka dijitaalka ah [More ...]
Waa maxay shuruudaha isticmaalka Kaarka Diiwaangelinta Ardayga? : Dawlada hoose ee magaalada Ankara ayaa hirgalineysa dalabka kaadhka diiwaangelinta ardayda. 20 Laga bilaabo Oktoobar ilaa Oktoobar ardayda 2019 ee ka hooseysa da'da kaararka 27 200 guddiga kaararka 60 [More ...]
Waxaan la hadalnay Orhan Sarıaltun, Madaxweynaha Rugta Qorsheyaasha Magaalada iyo Tezcan Karakuş Candan, Madaxa Laanta Ankara ee Rugta Dhismaha. Sida uu sheegayo Can Deniz Eraldemir oo ka socda Evrensel; [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin, darawalka baska 73 ayaa dhameystiray wareysiyada kadib markii lagu dhawaaqay. Marka lagu daro isugeynta codsiyada '1003', Dawlada Hoose ee Magaalada waxay shaqaaleysiin doontaa darawalka 73, oo ay ku jiraan haween. Muwaadiniinta reer Mersin [More ...]
Gawaarida gaadiidka dadweynaha ee u adeegaya magaalada Kocaeli ayaa si tartiib tartiib ah u bilaabay inay u guuraan nidaamka aruurinta lacag-bixinta elektronikada ee degmada Kocaeli (KentCard) tan iyo 2009. Bixinta lacag-sida-aad-go-aansiga iyada oo loo gudbayo nidaamka KentCard [More ...]
Ganacsiga gaadiidka dadweynaha Peace Sozen, dalxiisayaasha Iiraan ee saaran baska ee 30 kun oo ginni oo lacagta qalaad ah iyo TL ayaa milkiilaha boorsada u siiyay. Dalxiisyahan reer Iiraan ah ayaa uga mahadceliyay darawalka dabeecaddiisa xasaasiga ah. [More ...]
Gawaarida Gawaarida Koowaad ee maxalliga iyo ta Qaranka ee Gawaarida Mashiinka Waxaa Soosaaray Elsan A.Ş.
Istanbul, Ankara, Izmir, gaar ahaan magaalooyinka waa weyn 12 isticmaalo gaadiidka tareenada ee wadnaha ee dabiiciga ah "motor jar", markii ugu horeysay ee Turkey Elsen Inc. Waxaa soo saaray. Turkey ayaa soo saaraha ugu horeysay ee matoorrada korontada EMTask [More ...]
Jiraan barta. Dr. Booqashada Pelin Alpkökin ee ESTRAM
Madaxa Qaybta Tareenka ee Dawlada Hoose ee Magaaladda Istanbul Assoc. Dr. Pelin Alpkökin wuxuu kula kulmay duqa magaalada Büyükerşen xarunta tareenka fudud ee Eskişehir [More ...]
Wasiirka Wershadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank ayaa yidhi, olarak Sida Wasaarad ahaan, waxaan muhiimad weyn u leenahay Bursa warshadeena iyo dhaqaaqa teknolojiyadda. Bursa, kaabayaasha, mid ka mid ah warshadaha oo ka mid ah magaalooyin muhiim ugu yaabaa gacan ka-soo-saarka qiimo-daray in Turkey. " [More ...]
Warshadaha iyo Technology Wasiirka Mustafa Varank, Oyak Renault, blocks aluminium engine markii ugu horeysay ee Turkey, oo sheegaya in soo saaray duritaanka Cadaadis High Aluminum Factory, "warshad this, Renault ay dalkeena iyo engine ee hybrid oo kaliya in Europe [More ...]
Wasiirka Warshadaha iyo Teknolojiyadda Mustafa Varank wuxuu caddeeyay in Asil Çelik iyo Warshadaha Bacrin Gemlik, oo laga dhisi doono Bursa, ayaa yiri: [More ...]
Waddooyinka Tareenka ee Ruushka iyo Serbia waxay heshiis la galeen Montenegro (Bar) oo ku saabsan hirgelinta wadajirka ah ee mashruuca si casriyeyn loogu sameeyo wadada tareenka ee Belgrade - Vrbnica. Gudoomiyaha iyo Madaxa Sarkaalka Sare ee Tareenka Ruushka [More ...]